काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा नेपाली शल्यचिकित्सकहरुको टोलीद्वारा अस्वाभाविक वा ज्यादा मोटोपन कमगर्ने जटिल शल्यक्रिया सेवाको सुरुवात गरिएको छ ।
इमाडोल निवासी ६५ बर्षिय श्रीमती अञ्जु बुढाथोकी विगत लामो समयदेखि मोटोपनको समस्याबाट पीडित थिइन् । डिह्डुल गर्न गाह्रो, रक्तचाप बढेर १६०-९० भन्दा तल नझर्ने समस्या, अलिकति हिड्दा पनि स्वाँ स्वाँ हुने समस्या त छँदै थियो, त्यसमाथि राति निन्द्रा नपर्ने समस्याले बढी नै सताएको थियो । साथै राति तारान्तार पिसाव फेर्न गइरहनुपर्ने अर्को विकराल समस्या पनि थियो उनलाई । विभिन्न हस्पिटलहरुमा जचाउँईन, तर समस्या ज्यूँका त्यूँ ।
केहि समयपूर्व उनी नर्भिकको जनरल, जि.आई. एण्ड ल्यापारोस्कोपिक सर्जरी विभागमा परामर्शका लागि आएकी थिइन् । अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप अप्निया (राती घुर्ने र निन्द्रा नपर्ने) समस्याका लागि नर्भिकका बरिष्ठ श्वास–प्रश्वास रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. रमेश चोखानीसँगको परामर्शपश्च्यात जि.आई.एण्ड ल्यापारोस्कोपिक शल्यचिकित्सकरुको टोलीसंगको परामर्शमा रहेकी थिइन् । शरुमा निर्णय लिन निकै गाहे परेपटि शल्यचिकित्सकहरुको टिमको लगातार परामर्श र सहयोगका कारण यो शल्यक्रिया गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताइन् ।
बेरियाट्रिक शल्यक्रिया (जसलाई तौल कमगर्ने शल्यक्रिया वा मेटावोलिक (चयापचय) शल्यक्रिया पनि भनिन्छ) विशेषतः ज्यादा मोटोपन भएका (जसको बि.एम.आई. ४०÷के.जी. वा ३५ के.जी. भन्दा बढी भई मोटोपनका कारण सिर्जित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप अप्निया लगायत डिसलिपिडिमिया जस्ता मुटुजन्य रोग र निःसन्तान वा बाँझोपन जस्ता समस्याको उपचार गर्ने गरिन्छ । यसखाले शल्यक्रियाका फाइदाहरुमा केवल शारिरीक तौल कम गर्ने मात्र नभएर माथि उल्लेख गरिएका चिकित्सकीय समस्याहरुको न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नु समेत हुन्छ ।
यसखाले तमाम शल्यक्रियात्मक उपचार विश्वसनीयरुपमा स्वदेशमै र सर्वसुभल रुपमा उपलब्ध हुनथाले पश्चात् स्तरीय शल्यक्रियाकालागि अथाह धनराशी खर्चेर विदेश धाउनुपर्ने वाध्यता अब नरहेको शल्यक्रिया टोलीका सदस्य डा. प्रकाश चौधरीले बताए ।
त्यसर्थ, उक्त मोटोपन कम नगरिएसम्म उनमा प्रभावकारी उपचार गर्ने-गराउने सम्भावना थिएन नै । त्यसैले पारिवारिक सर–सल्लाह पश्चात् उपर्युक्त शल्यक्रिया गराउन श्रीमती अञ्जु तयार भइन । साथै उनको पित्तथैलीमा स–साना धेरै पत्थरीहरु (मल्टिपल कोलिलिथियासिस) पनि थिए । उक्त समस्याको समेत उपचार गराउनुपर्ने आवश्यकता उनमा थियो ।
सोही अनुरुप गत भदौ २५ गते बुधवार श्रीमती अञ्जु नर्भिकमा भर्ना भएकी थिइन् । भदौ २६ गते विहिवार उहाँको दुवै खाले सफलतम शल्यक्रिया गरियो । शल्यक्रियापूर्व हस्पिटलमा भर्ना हुँदा उहाँको तौल ९० के.जी. थियो हाल उनको तौल ८५ के.जी.मा झरिसकेको र वि.एम. आई. पनि केवल ४१ मात्रै रहेको छ ।
उनको सफलतम् शल्यक्रियात्मक उपचार नर्भिकका बरिष्ठ जनरल, जी.आई.एण्ड ल्यापारोस्कोपिक सर्जन प्रा.डा. मुकुन्दराज जोशीको टोलीले गरेको थियो ।
उक्त टोलीमा प्रा.डा. जोशीका अलावा डा. सञ्जय पौड्याल, डा. टंक प्रसाद बोहरा, डा. प्रकाश चौधरी र एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. सुरेश लामिछाने संलग्न थिए । शल्यक्रिया पश्चात् उहाँलाई एक दिन आई.सी.यु.मा राखी तत्पश्चात् वार्डमा सारिएको थियो । यसपूर्व नर्भिकमा त्यसखाले शल्यक्रिया नभएका भने होइनन् तर विदेशी विशेषज्ञहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मात्रै । नर्भिकमा नेपाली चिकित्सकहरुको टोलीद्वारा मात्रै गरिएको यस खाले सफलतम् शल्यक्रिया भने यो पहिलो थियो ।
श्रीमती बुढाथोकी हिजो साँझ डिस्चार्ज भइसकेकी छन् ।
नर्भिक र थाइल्याण्डको माहिडोल विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अवसहरुलाई विस्तार तथा साँस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै विद्यार्थी तथा संकायहरुबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालको नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेशन र थाइल्याण्डको माहिडोल विश्वविद्यालयबीच रणनीतिक साझेदारी तथा
विश्व मुटु दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी
काठमाडौँ । विश्व मुटु महासंघको आह्वानमा सन् २००० को सेप्टेम्बर अन्त्यदेखि मनाउन थालिएको विश्व मुटु दिवस यस वर्ष सेप्टेम्बर २९ तारीखका दिन विश्व मुटु महासंघका विश्वभरका १५० भन्दा बढी सदस्य
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा नेपाली शल्यचिकित्सकहरुको टोलीद्वारा अस्वाभाविक वा ज्यादा मोटोपन कमगर्ने जटिल शल्यक्रिया सेवाको सुरुवात गरिएको छ । जनरल, जि.आई.एण्ड ल्यापारोस्कोपिक शल्यक्रिया विभागका शल्यचिकित्सकरुको टोलीले नर्भिकमा हालै अस्वाभाविक मोटोपनका